Wasaaradda Shaqada “Shaqaale Cusub ayaa shaqo u Aadidoona Sacuudiga & Qadar “ – Radio Muqdisho
Wasaaradda Shaqada “Shaqaale Cusub ayaa shaqo u Aadidoona Sacuudiga & Qadar “
Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada ayaa sheegay in Wasaaraddu ay waddo Qorshayaal shaqo lagu siinayo shaqaalaha Dowladda iyo kuwa Madaxa banaan sidii loo la socon lahaa.
Cismaan Libaax Ibraahim Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha bulshada oo la hadlayay warbaahinta Qaranka ayaa yiri.
“Waxaa meel wanaagsan inoo maraya dadaallada aan ku doonayno inaan shaqo ugu abuurno Dhallinyarada Soomaaliyeed, meelo badan ayaana wax ka keenay”
Dhanka kale Cismaan Libaax Ibraahim ayaa sheegay in bisha koowaad ee sanadka Cusub ee 2016’ka uu billaaban doono fursado shaqo oo la siin doono Shaqaalaha Soomaaliyeed.
“Bisha Janaayo waxaa billaaban doona wax uun, waxaa jira fursado badan oo lunsanaa oo ay hadda Wasaaradda soo saartay , sidaad ogtihiin 5,000 oo Shaqaale Ajnebi ah ayaa dalka jooga oo ka shaqeeya fursadaha shaqo ee dalka yaallana waxaa leh Shaqaalaha Soomaaliyeed, sharcigii shaqaalaha ajnabiga baarlamaanka ayaa ansixiyay kaas ayaana ku shaqaynaa” Ayuu yiri Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Shaqada.
Ugu dambayntii, Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Shaqada ayaa sheegay in ay gacanta ku hayaan shaqaale Soomaliyeed oo Dhawaan shaqo u tagidoona dalalka Sacuudiga iyo Qadar si ay uga faa’iidaystaan shaqooyinka ay qaban karaan ee yaalla dalalkaas.
Madaxweyne Xasan Sheekh oo Maalintii Saddexaad ku sugan Baladweyn
Shabaab oo laga saaray Tuulooyin ku yaalla galbeedka Magaalada Kismaayo